Baaq ku wajahan Dowlada Soomaaliya oo si badheedh ah u caadeysatay cadaawada ay u hayaan Somaliland. |
Baaq ku wajahan Dowlada Soomaaliya oo si badheedh ah u caadeysatay cadaawada ay u hayaan Somaliland.
Tixraac: SSE/DK 072/31032018
Dallada SSE oo ay ku bahoobeen jaaliyadaha ama ururada Somaliland ee Yurub, waxa ay baaqan ku muujinayaan cadaawada foosha xun ee xukuumadda Soomaaliya ay kula kacdey dadka iyo dalka Somaliland. Cadaawadani laba kaclaysey tan iyo markii la saxeexay heshiiska saddex geesoodka ee Somaliland, Itoobiya iyo UAE (DP World). Si qaawan oo badheedh ah ayay u muujiyeen naceybka ay u hayaan Somaliland markii Golayaashooda Xukuumadda Soomaaliya ay soo saareen go’aamo ama sharciyo ay waxba kama jiraan ku tilmaamayaan heshiiskaa saddex geesoodka ah ee ay Somaliland qayb ka tahay. Intaa kuma ay joogin ee waxay dacwado is-dabo jog ah u gudbiyeen Ururka ay ku midoobeen dalalka Carabta, ka ay midoobeen waddamada Africa iyo ka urur goboleedka Igad.Waxa kale oo aynu ognahay in bisha Maarso 27keedii ay Soomaaliya dacwad u gudbiyeen Qaramada midoobey, kaasoo ku wajahnaa in dowlada Imaaraadku ay ku xad-gudubtay shuruucda caalamiga ka dib markii ay heshiis la gashay Somaliland. Mudooyinkii u dambeeyay waxa kale oo ay xukuumadda Soomaaliya isku dayaysay inay la wareegto maamulka hawada ama duulimaadyada taasoo baal marsan wixii hore ay ugu heshiiyeen Somaliland iyo Soomaaliya.
Aragtida Dallada SSE:
Ugu horreyn waxa Ilaahay mahadii ah in dhammaan tallaabooyinkaa ay qaadeen xukuumadda Soomaaliya inay noqdeen qaar ay kala kulmeen weji gabax isla markaana aanay uga soo hoyan wax natiijo ah. Waxa u dambeeyay kii Qaramada midoobey oo loo sheegay in wada-haddal lagu dhammeeyo isla markaana Qaramada Midoobey aanay danaynayn in arrinkan golaheeda lagaga sii hadlo.Aragtida Dallada SSE waxay tahay in Xukuumadda Soomaaliya aanay haba yaraatee wax cashar ah ka baran taariikhdii madoobeyd ee raadkeedu weli qoyanyahay ee ay kula kaceen dalka iyo dadka reer Somaliland. Falalkani waxay markhaati cad ka yihiin cadaawada iyo naceybka weli ku jira Golayaasha Xukuumadda ee Soomaaliya. Waxay muujiyeen sida ay uga xunyihiin wixii horumar dhaqaale ah ee u soo kordhaya Gobolka iyo mandaqada Geeska Afrika oo maanta u baahan nolol ka duwan ta maanta lagu jiro iyo tii shalay la soo marayba.
Dallada SSE waxay baaqan ku cadeynaysaa in maamulka somaliya si aan gabasho lahayn ugu xadgudbay dhammaan waxyaabihii hore looga wada-hadlay. Sidoo kale waxay dalada SSE u cadeynaysaa shacabka Somaliland gudo iyo debedba in dawlada somaliya aaney awood sharci , awood siyaasdadeed iyo mid ciidantoona u lahayn in wax yeesho qaranka somaliland.
Dallada SSE waxay baaqan ku muujinayaan taageerada ay u hayaan Xukuumadda Somaliland oo mowqif adag ka qaadatay ka dib markii Madaxweynaha Somaliland ku dhawaaqay inuu joojiyaywada-hadalkii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya. Waa arrin loo qaaday dhinaca fiican, maadaama aan la aamini Karin ama aan lagu kalsoonaan maamulka Soomaaliya. Sidoo kale waxay dalada SSE taageero la garab taagantahay Baarlamaanka Somaliland uu isaguna dhinaciisa taageero iyo kalsooni u muujiyay xukuumadda Somaliland heshiisyada ay la gashey dhinacyada kale. Dhammaan Golayaasha Xukuumaddu waxay qaateen tallaabooyinkii loo baahnaa oo jawaab u noqonayay Xukuumadda Soomaaliya oo caadeysatay in ay had goor ku wacad furaan wixii hore loogu heshiiyay.
Dallada SSE waxay rajaynaysaa in wakhti aan sidaa u fogeyn ay Soomaaliya garowshiiyo ka bixin doonto xaqiiqada jirta oo ay ogolaan doonaan in loo wada noolaado labo waddan oo jaar fiican ah oo ka wada shaqeeyay arrimaha mandaqada iyo kuwa gobolka guu d ahaan.
Ugu dambeyn waxa aanu dhammaan Golayaasha Qaranka, Axsaabta siyaasada iyo guud ahaanba shicibka reer Somaliland ee qaaliga nagu ah aanu kula dardaarmaynaa in la adkeeyo midnimada iyo wada’jirka ummada reer Somaliland si looga gudbo duruufaha tirada badan ee inagu xeeran. Baaqan ka sakow, Dallada SSE iyada oo wada-shaqeyn iyo xidhiidh la leh ururada kale ee qurbo jooga Somaliland, waxay daraaseyn doontaa oo ay si dhow ula socon doontaa ficilada foosha xun ee maamulka Soomaaliya wadaan, kuwaasoo aanu la wadaagi doono dadka reer Somaliland iyo beesha caalamkaba.
Tel: +45 25 5315